लिभर क्यान्सरबाट ग्रसित अमिताभ बच्चनलाइ पनि लग्यो कोरोना, अस्पतालबाट भावुक हुदै सार्वजनिक गरे पहिलो भिडियो – Online Nepal Site
धर्मले नछेकेको प्रेम !
रेखा थापा जस्तै देखिने युवती भेटिईन |कस्तो अचम्म देख्ने जति सबै चकित परे (हेर्नुस् भिडियो)
घर भित्र सर्पैसर्प, घर मालिक मृतक फेला परेपछि खुलेको चकित पार्ने रहस्य
शनिबार मध्यराती बालकुमारी मन्दिरमा घटेको त्यो नमिठो घटना
प्रचण्ड पत्नी सीताको स्वास्थ्यबारे आयो दुखद खबर ! मेडीसीटीको आइसीयूमा
मुख्य पृष्ठ /Video/लिभर क्यान्सरबाट ग्रसित अमिताभ बच्चनलाइ पनि लग्यो कोरोना, अस्पतालबाट भावुक हुदै सार्वजनिक गरे पहिलो भिडियो
2,250 1 minute read
काठमाडौँ- भारतीय सिने जगतका चर्चित अभिनेता अमिताभ वच्चनलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ।अमिताभ आफैँले शनिबार राति आफूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका हुन्।
उनले आफू कोरोना भाइरस संक्रमित भएको पुष्टि भएपछि अस्पतालमा आइसोलेसनमा बसेको जानकारी आफ्ना शुभेच्छुकहरुलाई गराएका छन्। उनलाई मुम्बईको नानावती अस्पतालमा भर्ना गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
उनले आफ्नो परिवारका अन्य सदस्य र आफूसँग काम गर्नेहरुको पनि कोरोना भाइरस परीक्षण भएको र नतिजा पर्खिरहेको जानकारी पनि गराएका छन्। उनले पछिल्लो दस दिनमा आफूसँग भेटेकाहरुलाई पनि संक्रमणको परीक्षण गर्न आग्रह गरेका छन्।७७ वर्षीय यी भारतीय सुपरस्टारले पछिल्लो ५० वर्षमा सयौँ सिनेमाहरुमा काम गरिसकेका छन्।
केहि समय अघि उनलाई कलेजोमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गराइएको थियो । बच्चन लिभर क्यान्सरबाट ग्रसित छन् । सन् २०१२ मा अमिताभ १२ दिनका लागि अस्पताल भर्ना भएका थिए। त्यतिबेला उनको सर्जरी समेत भएको थियो। त्यसपछि सन् १९८२ मा फिल्म ‘कूली’को सुटिङ दौरान उनलाई गम्भिर चोट लागेको थियो। परिस्थिती यस्तो थियो कि उनलाई चिकित्सकहरुले ‘क्लिनकल्ली डे’ड’ घोषित गरिसकेका थिए। एक अन्तरवार्तामा अमिताभ स्वयम्ले हेपा’टाइटिसको इन्फेक्सनका कारण आफ्नो ७५ प्रतिशत कलेजो खराब भएको बताएका थिए।
त्यस्तै बलिउड अभिनेता अभिषेक बच्चनलाई पनि कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ। उनले ट्वीटर मार्फत आफू कोरोना संक्रमित भएको जानकारी गराएका छन्। अभिषेकका पिता अमिताभले शनिबार राति आफूलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराएका थिए।
उनले आफ्नो ट्वीटमा संक्रमण पुष्टि भएपश्चान आफू नानावति अस्पतालको आइसोलेशनमा बसेको जानकारी गराएका थिए। उनले परिवारका अन्य सदस्य र आफूसँग काम गर्नेहरुको पनि कोरोना भाइरस परिक्षण भएको र नतिजा पखिएर बसेको जानकारी गराएका थिए।
त्यसको एक घण्टामा नै अभिषेकले आफू पनि कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी गराएका छन्। उनले बुबा र आफूलाई सामान्य लक्षण देखिएको र अहिले अस्पतालमा भर्ना गरिएको जानकारी दिएका छन्। कोरोना पोजेटिभ भईसकेपछि सम्बन्धित सबै प्रशासनलाई खबर गरिएको र परिवारका अन्य सदस्य तथा कर्मचारीको परिक्षण गराइएको बताएका छन्। उनले सबैलाई नआत्तिन आग्रह गरेका छन्।
१०० बर्षिय आमा ,श्रिमान बित्दा उठाउन कोहि आएनन् ,घर जादा गु खान आकि भन्छन् ,कठै आमा (हेर्नुस् भिडियो)
सुस्मिताकी नन्दलाई कडा चेता,वनी, ‘ससुरालाई जनताले भेटे का;ट्थे’ ज्वाई–नन्द मास्टरमाइन्ड भएको दाबी (हेर्नुहोस भिडियो)
जन्मिदा पुरुष, अहिले बनिन् सुन्दरी अनिताः खुलाइन सबै गोप्य कुरा (भिडियो)
झापामा श्रीमानले श्रीमतीकै कारण म संसार छोडे, श्रीमतीलाई कारवाही गर्नु भन्दै यस्तो म्यासेज भाईलाइ पठाएर मनकुमारले छोडे संसार (भिडियो हेर्नुस्)
श्रीमान सँगको डिभोर्ष पछि बनिन करोड़पति,हेर्नुहोस कसरी भिडियोमा